I-Bopet, ifilimu yezilwane zasekhaya, iPhrinta Base Ifilimu - I-Shuyang Genzon Novel Equipment Co, Ltd.
Njalo ngomqondo omuhle wensizakalo, ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo, insizakalo ecatshangwe ngemuva kokuthengisa, setha idumela elihle lemakethe embonini yamafilimu.
Isungulwe ngonyaka we-2017, iSubaang Genzon Novel Equipment Co, Ltd. (ngemuva kwalokho ibizwa nge- "GENZON Novel Equipment") ilawulwa yiGENZON GROUP nayo ephethe ukuphatha nokusebenza kwayo.
Chofoza ukuze uthole incwadi
Iqembu eliphambili le-R&D, liholwa udokotela ofundele eMelika, limiswe eSilicon Valley ukuthola ubuchwepheshe obuhola umhlaba Isisekelo sokuhlola amafilimu asezingeni eliphakeme sisiza ubuchwepheshe bethu obuhle bokukhiqiza ekukhiqizeni, ekutadisheni nasekucwaningeni ubuchwepheshe obonakalayo be-polyester synthesis, a emhlabeni jikelele qala impahla ezimele yezobuchwepheshe nezobuchwepheshe obunelungelo lobunikazi
Imikhiqizo ye-wire yegolide
imikhiqizo yokufaka kagesi
ukuvikelwa kwensiza kagesi
Gxila ku-GENZON Novel Equipment, zijwayeze ukuthambekela kwezimboni, futhi uqhubeke ujwayele izinto ze-Novel Equipment ezikuzungezile.
Kusukela i-Genzon Novel Equipment isiphothule ukuhlangana futhi kwahlelwa kabusha kwezimpahla futhi yabona ukuqalwa okubushelelezi komugqa wokukhiqiza, ngakolunye uhlangothi ...
Ukuqhathanisa inqubo yokukhiqiza ...
Okwamanje, kunemizila emi-2 ehlukene yokukhiqiza embonini yeBOPET, enye inqubo yokusikeka, enye iyancibilika ngokuqondile. Ngaphambi kuka-2013, imakethe yayisuselwa kakhulu kwinqubo yokusikeka, i-whi ...
Isimo Esikhona Namathemba O ...
I-PX iyinto ehamba phambili eluhlaza okhiqizayo embonini yonke ye-polyester, Ukushintshwa komkhakha wayo kunomthelela obaluleke kakhulu kuyo yonke imboni ethile. ukungena ngokusemthethweni ekuthuthukisweni kwe ...
Izinto ze-Novel Genzon,
Ngomhlaka 28 kaSepthemba, umcimbi wasendaweni we-2019 Suqian Green Industry Expo wabanjelwa ukuvulwa okukhulu esikhungweni saseSuqian Exhibition. Ingqikithi yale Green Fair ithi "luhlaza, ukuhlanganiswa kanye nokugxuma ...